Askar kasoo baxsatay Axmed Madoobe oo soo lugeeyey Kismaayo illaa Muqdisho | Xaysimo
Home War Askar kasoo baxsatay Axmed Madoobe oo soo lugeeyey Kismaayo illaa Muqdisho
Askar kasoo baxsatay Axmed Madoobe oo soo lugeeyey Kismaayo illaa Muqdisho
11 askari oo haray uga tirsanaa jiray ciidanka daraawiishta Jubbaland ee Axmed Madoobe, oo ka soo lugeeyey magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Dagaalkaas waxaa looga dilay shan askari, waxayna Al-Shabaab kala wareegeen gacan ku heynta magaalada Jamaame oo ay muddo joogeen. Markii ay ku adkaatay inay sii joogaan Jamaame, kuna laaba waayeen dhulka uu ka arimiyo maamulka Jubbaland ayey go’aansadeen inay u soo lugeeyaan Muqdisho.
Waxa uu sheegay in rafaad dheer kadib, 11-koodii oo wata hal askari ay maalinka hor soo gaareen magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaas oo ugu horeysay meel ay ka taliso dowladda Soomaaliya.
Waxay madaxda ugu sarreysa dalka ka codsadeen inay u raadiyaan xuquuqdooda, iyagoo sheegay inay wataan hubkooda oo dhameys tiran meeshii loo dirana ay ka howlgalayaan.